Dambiile dagaal | Somaliland.Org
May 30, 2008	Daba-galka lagu hayo dad Soomaliyeed oo haysta deggenaanshaha dalalka reer gableedka, laguna eedaynayo in ay galeen falal ka dhan ah bani-aadamnimada iyo weliba iyaga oo si aan caadiga ahayn ugu gafey sharciyada dalalkan reer gableedka. Markii xalay la daawaday filimkii laga soo duubay daba-galkii lagu sameeyey madaxda ugu awoodda badan dawladda Imbegathi ee ka talisa Baydhaba, gaar ahaan afarta nin ee kala ah: Abdillaahi Yuusuf, Darwiish, Gacma dheere iyo Ahmed Taajir, ee lagu eedeynayey falalka dagaal ee ay kula keceen shacabka Somaliyeed ee deggen Muqdisha iyo meela kaleba. Ayaa durba dadku ka faalloonayaan sidii laga yeeli doono iyo ficilka ay cashuur bixiyayaasha Ingiriisku ka qaadan doonaan qoysaskooda ku nool lacagtooda. Dambiile dagaal deris ma kula yahay (dulucda sheekada filimka).
Mawduuca filimka oo u dhignaa sida aan kor ku soo sheegnay, ayaa wariyayaasha iyo gadh-wadeennadooduba ay si naf-hurnimo ah ugu kuur galeen xaqiiqada ka jirta Somaliya iyo sidii ay u soo bandhigi lahaayeen, shakhsiyaadka ka dambeeya xasuuqa ka dhacaya Muqdisha iyo agagaarkeeda. Mas’uuliyiin ka tirsan dawladda Ingiriiskana waxa ay hor dhigeen sida ay dhaqaalaha ula garab taagan yihiin dambiilayaashaasi ee aanay ula soconnin qaladka ay ku garabtaagan yihiin. Dambiilayaashan dadka Somaliyeed xasuuqay ee deggenaashahooduna yahay dalkan Ingiriiska ammaba lagu daweeyo dalkan Ingiriiska, oo weliba xaasaskoodana laga masruufo cashuurta laga qaado shaqaalaha dalalkani, ayaa laga yaabaa in ay dareen cusub geliso hay’adaha nabadgelyada iyo sharciga ee dalkan Ingiriiska.
Haddaba, si kastaba arrini ha ahaatee, waxa su’aalo badan la iska weydiinayaa in ay dambiilayaasha dagaalka ee xasuuqa Muqdisho lagu eedaynayaa ay ku kooban yihiin Abdillaahi Yuusuf, Darwiish, Gacma-dheere iyo Ahmed Taajir iyo in ay kuwo kale jiraan? Daba-galkuna ma intaasi ayuun buu ku ekaanayaa mise kuwo kale ayaa jira, maxaase laga yeelayaa dadkan dambiilayaasha ah iyo kuwa kale ee liiska dambiilayaasha ku qoran? Jawaabta su’aalahaasi ninkii ogina waa og yahay, kii aan ogeynina dib ayaa uu ka ogaan doonaa. Waxase muhiim ah in la isla fahmo in dawladaha reer galbeedku aanay miskiin u ahayn sida fudud ee ay ugu dabacsan tahay qaxootiyada ay qaabilaan. Sharcigooduna uu dhib badan yahay marka aad ku xad-gudubto. Kamana indho la’a hunguri xumada ay dadka qaar sharciga u jabinayaan.
Waxan ognahay in ay Somali badani u dhaqmaan, si aan sharciga iyo diinteennaba u fiicnayn, waxana fiican in ay qaladkaa ka waantoobaan, oo ay u soo laabtaan dariiqa nolosha runta ah, ee aan kaga badbaadayno dhib innaga soo gaadha sharciga iyo mujtamaca aan la noollahay. Sharciga dalalkan oo aad sidooda ugu dhaqantaana maaha mid dhib kuu keenaya. Waxana loo baahan yahay haddii aad siyaasi ka noqoto Somaliya amma aad ganacsade ka noqoto meel kale, iyada oo ay carruur aad dhashay dhulkan kaa joogto, waxana habboon in aad la socodsiisid dalka aad deggen tahay dawladdiisa si ay wixii dhaqaale ahaan kaaga gu’ i kara reerkaaga xisaabteeda laguu siiyo ammaba lagugu garab galo barnaamijka aad dalka uga baxayso. Laakiin haddii aad mooddo in aad ka xariifsan tahay sharci ilaaliyayaasha iyo hay’adaha aad ku hoos nooshahay amma aanay ku ogeyn ammaba ku ogaan karin, waxa iman doonta in aad maalin maalmaha ka mid ah lagaa fiirsado shaashadaha TV-yada, adiga oo sida Darwiish, Ahmed Taajir, Gacma-dheere amma Abdillaahi Yuusuf dambiile u ah, sida xalay oo kale dhacday.
Nasiib darraduna waxa ay ku habsanaysaa carruurtii iyo qofkii aad nolosha qaybsateen, ee carruurta ku hadhay ee aad ka carartay. Aakhirana waxa aad ku sifoobaysaa beenaalayaasha alle ka go’ay, ee aan wanaagga u saaxiibka ahayn. Ifkana cid kaaga gargaaraysaa ma jirto, oo dhaqan ahaan arrimaha noocan ah Somalidu xeerkeeda kuma jiro in tuugnimo la iska gargaaro.
Aniguna shakhsi ahaan waxan taageerayaa in la saxo khaladkasta oo mujtamaca ku dhex jira, oo aan noqonno ummad ku nool sharaf iyo sida sharciga ah, musuq maasuq iyo xatooyana ka nadiif ah. Baahideennana aynaan ku xallilin khayaamo iyo tuugnimo . Shakhsiyaadkan aan xalay ka daawannay TV-ga la yidhaa Channel 4, ee dalkan Ingiriiskana waa in si dhakhso ah loo horkeeno maxkamad caalami ah. Si ay inta kalena ugu quus qaataan.